चन्द्रकिशोर - कान्तिपुर समाचार
चन्द्रकिशोरका लेखहरु :
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ‘मौन अवधि’ सुरु भइसकेको छ । हरेक निर्वाचनताका उम्मेदवारहरूले, आकांक्षीहरूले सम्पूर्ण प्रचारप्रसार सकिसकेपछि मतदातालाई आफ्नो धारणा बनाउन दुई दिनको समय दिने गरिएको हो र यही अवधि नै मौन अवधि कहलाएको हो ।
भुइँतहमा चुनावी राप
एउटा मान्छे भेडालाई डोर्‍याउँदै कतै जाँदै थियो । उसलाई पछ्याइरहेको चोर डोरी काटेर भेडा लिई भाग्यो । भेडा चोरिएको थाहा पाएपछि त्यो मान्छे खोजीमा यताउता भौंतारिन थाल्यो । अन्ततोगत्वा ऊ कुवाछेउ पुग्यो जहाँ उसले अर्को मान्छेलाई हैरानीको मुद्रामा भेट्यो ।
नेपालमा पहिलो पटक २०७२ सालको संविधानमा स्थानीय तहबारे उल्लेख गरियो, जसका कारण शक्तिको अभ्यास तलसम्म पुग्न सक्यो । शक्तिको अवतरण भुइँतहमै भयो । तर, ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने संकथनले के गर्‍यो ? भुइँमान्छेले घरआँगनमा अवतरित सरकारमा आफ्नो कत्तिको स्वामित्व पाए ? सत्ताको लाभ बढीभन्दा बढी मान्छेले पाउन सके ? भुइँयाबाटै भावी नेतृत्वको निर्माण हुन सक्यो ? दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उदारवादी दृष्टिकोण राख्न सके ?
जनसम्बन्धको छुकछुके रेल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि छिमेकी मुलुक भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका छन् । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि दिल्ली नयाँ होइन । नेपालका प्रधानमन्त्रीको जबजब भारत भ्रमण हुन्छ, त्यतिखेर नेपालभित्रको राजनीतिक माहोल स्पन्दित हुन पुग्छ । भूराजनीतिक कारणले पनि भारतसँगको सम्बन्ध र भ्रमण कुनै पनि सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्ने गर्छ । सम्बन्धको आयाम समय र परिस्थिति हुँदै यस पछिल्लो भ्रमणको संघारसम्म आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवामा ‘केही गर्ने’ चाहना, आँट र योजना छ भने, नेपालका पक्षमा ‘अनुकूलता’ फेरि प्राप्त हुने संकेत देखा परेको छ ।
यति बेला चुनावी माहोल बन्दै छ । सबै कुरा अनुकूल रहे स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै हुन्छ । निर्वाचन जुनसुकै तहको किन नहोस्, त्यसमा दलविशेषले प्राप्त गर्ने सफलताले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढाउँछ नै । दलहरूको पहिचान गाँसिएर हुने निर्वाचनमा माथिल्लो तहका नेताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता भएपछि तृणतहका नेताहरूले बल पाउँछन् । अब त मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रमा हुने निर्वाचन दलगत राजनीतिभन्दा पृथक् छैन ।
‘सखी हे किसानक दुखक नहीँ ओर !’
मधेसको देहाततिर एउटा लघुकथा प्रचलित छ । कतै सामूहिक भोज हुँदै थियो । खानेहरूको पंक्तिमा सुरदास पनि बसेको थियो । भात पस्किइएपछि उसले खानका लागि वितरित पात (थाली) मा छाम्यो, केही भेट्टायो र त्यसलाई सुमसुम्यायो । यसै गरी दाल, तरकारी, अचार उसको पातमा पनि हालियो ।
जग्गा हुनेखानेकै पोल्टामा
कथा एक : उनी पहिला व्यापार गर्थे, त्योभन्दा नाफा जग्गाको कारोबारमा देखे । उनको आर्थिक हैसियत पछिल्लो आधा दशकमै ह्वात्तै उक्लिएको छ । भन्दै थिए, ‘व्यापार गर्दा अनेक जोखिम हुन्छ, राजनीतिक आन्दोलनले समेत आघात पुर्‍याउँछ । तर जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्‍यो भने कुनै रिस्क हुँदैन । लगानीचैं एकमुस्ट गर्नुपर्छ । आँट भयो भने च्याउसरि उम्रिएका बैंकहरूले सघाइहाल्छन् ।’
गान्धी किन मर्दैनन् ?
३० जनवरी १९४८ मा महात्मा गान्धीमाथि दिल्लीमा आयोजित प्रार्थनासभामा गोली प्रहार भो, उनी भौतिक रूपमा ढले । सुनियोजित षड्यन्त्र गरी गान्धीको हत्या गर्ने नाथुराम गोडसे थिए । त्यो दिनदेखि फाँसी नलागुन्जेल एक वर्ष नौ महिना सोह्र दिनसम्म गोडसे आफूले गान्धीलाई सधैंका लागि भारत र दुनियाँबाट समाप्त गरिदिएको विश्वासमा थिए ।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ घोषणा गरेको छ । यसको स्वागत र विरोध भइरहेको छ । सम्मति र विमति दुवै लोकतन्त्रकै पाटा हुन् । कैयौं प्रश्न उदाएका छन्, कतिपय जवाफ फेरि पनि छरपस्टिएका छन् । लामो समयदेखि थाती रहेको यो विवाद टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश २ सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा विवादलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले टुंगो लगाएकामा प्रदेश २ सरकारको नेतृत्वलाई चिरकालसम्म याद गरिनेछ ।